संसदीय समितिको कामको समिक्षा तीन वर्षमा के के काम गरे संसदीय समितिहरूले ? संसद, सरकार बनाउने मात्रै होईन सरकारले गरेका कामहरुको अनुगमन, निगरानी र बिग्रिएका कामहरु सच्याउन निर्देशन दिने थलो पनि हो । त्यसका लागि संसदीय समितिहरु हुन्छन् । तर संसदीय समितिहरुले वितेको तीन वर्ष सोचेजसरी काम गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन् । बिहिबार, मंसिर २५, २०७७
केही समय सरेको नेकपा विवाद, टरेर जाला ? सोमबार, मंसिर ८, २०७७ पार्टी नेतृत्वको जिम्मेवारी पाएका दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविच देखिएको विवाद लामो समयदेखि समाधानतर्फ अघि बढिरहेको छैन । दुवै अध्यक्ष लिखित रुपमै आरोप प्रत्यारोपमा लागेका छन् ।
धान खरिदमा सरकारको ढिलाई, मूल्यमा ठगिंदै किसान आईतबार, मंसिर ७, २०७७ यस वर्ष सरकारले मोटा धानको मुल्य प्रतिक्वीन्टल २७ सय ३५ र मध्यम धानको मूल्य प्रतिक्वीन्टल २८ सय ८५ रुपैयाँ तोकेको छ । तर किसानले २१ देखि २२ सय रुपैयाँमै व्यापारीलाई धान बेचिरहेका छन् ।
पहिलो चरणमा खोप किन्न १० देखि १२ अर्ब आवश्यक आईतबार, कात्तिक ३०, २०७७ सरकारले स्वास्थ्य, अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति बनाएको छ । सरकारी तहबाट बनेको यो समितिले खोपको आपूर्ति, भण्डारणदेखि प्रयोसम्मको विषयमा काम गर्ने डाक्टर कार्कीले बताउनुभयो ।
चाडबाड, चिसो र कोरोना : खानपानमा कसरी ख्याल गर्ने ? १९ घण्टा चाडबाडको समय भएकाले मानिसहरुको खानपान पनि सामान्य बेलाको भन्दा फरक छ ।
आफ्नैबाट असुरक्षित महिला, न्यायको लडाईमै अर्को हिंसा शनिबार, कात्तिक १, २०७७ ८२ प्रतिशतभन्दा बढी अपराध आफन्त, नातेदार, छिमेकी तथा अन्य चिनेजानेकैबाट हुने गरेको छ । जसका कारण कतिपय केस प्रहरी अनुसन्धानमा नआई गुपचुप मिलाउने गरेको देखिन्छ ।
'स्वास्थ्य सावधानीमा भएको लापरवाहीले भयावह अवस्था ल्याउन सक्छ' बिहिबार, असोज २२, २०७७ डाक्टर पौडेलले भन्नुभयो, 'नेपालमा सङ्क्रमितको तुलनामा मृत्युदर निकै कम छ । त्यसकारण नागरिकले गम्भीर भएर सोचिरहनुभएको छैन । उहाँहरू मृतकको संख्या हेरिरहनुभएको भएको छ । यस्तो वेवास्ताले भोली भयावह अवस्था आउनसक्छ ।'
विपद्को बेला कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ? बुधबार, असार ३१, २०७७ निरन्तरको वर्षाले देशभर बाढि र पहिरोको कहर छ । कतै डुबान छ भने घर, भवन, सडक र पुल भत्किएका छन् ।
कृषि मन्त्रालय भन्छ, धानमा युरिया होइन, डिएपी मल प्रयोग गर्नुस् सोमबार, असार ८, २०७७ मलको अभावको विषयमा कृषि मन्त्रालय पनि जानकार छ । तर लकडाउनका कारण भारतको कलकत्ता र गुजरातमा मल रोकिंदा समस्या भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
घरेलु उपायबाटै फौजी किरा नियन्त्रण गरौं शनिबार, जेठ ३१, २०७७ कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अमेरिकी फौजी किराले पु¥याउने क्षति न्यूनीकरणका लागि प्रयास भइरहेको दाबी गर्दा गर्दै बारीको मकै सकिंदैछ । मकैबालीमै भर पर्नुपर्ने पहाडी भेगका किसानहरू अनिकाल सामाना गर्नुपर्ने पीरमा छन् ।
खान पुग्नेहरू राहत लिन नजानु : संघीय सरकार बिहिबार, चैत २७, २०७६ सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले विपन्न वर्गको पहिचान गर्न स्थानीय सरकारलाई सघाउनु नागरिकको पनि कर्तव्य भएको भन्दै साँच्चै सहयोग आवश्यकता भएकाहरुले मात्रै राहत माग्न अनुरोध गर्नुभयो ।
प्रदेश सरकार भन्छन्,'हाम्रो तयारी चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा छैन' सोमबार, चैत १७, २०७६ हाल प्रदेशमा तीन हजार क्षमताको क्वारेन्टाइन तयारी अवस्थामा छ भने दुई सय भन्दा बढी मानिस क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छन् । डब्लुएचओको मान्यता र नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसारकै क्वारेन्टाइन निर्माण भएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ ।
कोरोना संक्रमण विरुद्ध तयारीमा जुटेका छौं : स्थानीय सरकार आईतबार, चैत २, २०७६ बागमति प्रदेशको ललितपुर महानगरपालिकाले आफ्नै पहलमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण रोक्न स्यानिटाइजर र मास्क बनाउन सुरु गरेको छ । बजारमा १७ रुपैयाँ पर्ने मास्क महानगरले ७ रुपैयाँमा उपलब्ध गराएको छ । स्यानिटाइजर पनि बजारको भन्दा निकै सस्तो छ ।
...र, उनीहरू शिविर कुरिरहेछन् शनिबार, चैत १, २०७६ कोही अमेरिका छिरे कोही अष्ट्रेलिया, डेनमार्क, नेदरल्यान्ड्स, न्युजिल्यान्ड पुगेपछि परिवारका केही सदस्य जीर्ण शिविर कुरिबसेका छन् । शिविरको मध्यभागको बिसौनीमा आफन्तसँग भेट हुने आशाको पर्खाइमा भेटिनुभयो, ७९ बर्षका एक जेष्ठ नागरिक ।
प्रदेशका भूमि मन्त्रालय नाम मात्रैका शुक्रबार, फागुन ३०, २०७६ संघबाट अधिकार नआउँदा प्रदेश नम्बर २ मा आवश्यक पर्दा पुरानै तथ्यांकलाई फेरबदल गर्दै काम चलाउने गरिएको छ । नाम भूमि व्यवस्था भएपनि काम भने नपाइएको प्रदेश नम्बर २ को भूमी मन्त्रालयका प्रमुख नापी अधिकृत, उपसचिव विजय कुमार महतोको भनाइ छ ।
चैत पहिलो साताबाट बेरोजगारहरूले काम पाउने बिहिबार, फागुन २९, २०७६ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत यस बर्ष बेरोजगारहरूले चैतको पहिलो साताबाट काम पाउने भएका छन् । यस वर्ष समयमै काम सुरु गर्न आर्थिक वर्षको पहिलो चरणमा ६ सय २३ स्थानीय तहलाई कुल ५ अर्ब १ करोड मध्ये फागुनको पहिलो साता केन्द्र सरकारले २ अर्ब रकम निकासा गरेको हो ।
२२ हजार युवाले लिए सहुलियतपूर्ण कर्जा शनिबार, फागुन १७, २०७६ २०७५ साल कार्तिका २० गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको यो कार्यक्रम अन्तरगत हालसम्म २२ हजार भन्दा बढी युवाले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका राष्ट्रिय युवा परिषद्का सूचना अधिकारी ध्रुवराज पौडेलले सीआईएनसँग बताउनुभयो ।
के प्रधानमन्त्रीको नगर मूलुककै शक्तिशाली नगर हो ? शुक्रबार, फागुन ९, २०७६ धेरैवटा राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू छन् । राजनीतिमा मेयरको सिधै पहुँच मुलुकका प्रधानमन्त्रीसँग छ । मेयर रोमनाथ ओली उहाँकै घरमा बसिरहनु भएको छ । त्यस हिसावले पनि दमकलाई शक्तिशाली नगरपालिका भनिंदो रहेछ ।
चिसो मौसममा घरपालुवा पशुपन्छीको स्याहार कसरी गर्ने ?
पशु सेवा विभागका अनुसार पीपीआर रोगका कारण नेपालमा बर्सेनि धेरै सङ्ख्यामा भेडाबाख्रा मर्ने गरेका छन् । बिहिबार, मंसिर १६, २०७८
म्याग्दीमा जीप दुर्घटना हुँदा एकै गाउँका चार जनाको मृत्यु
मृत्युहुनेहरूमा रघुगंगा गाउँपालिका-१ का चालक ३५ वर्षका दुतबहादुर थापा, २४ वर्षका खिम पुन, ५७ वर्षका खिमनाथ शर्मा र ३० वर्षका गौमाया विक रहनुभएको छ । मंगलबार, मंसिर १४, २०७८
काभ्रेको ठूलो पर्सेलमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन हुने
काभ्रे क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद गङ्गाबहादुर दोङले तेमाल गाउँपालिका र वडा नम्बर ६ का अध्यक्षसँग समन्वय गरी स्वास्थ्य शिविर चलाउने मिति तोक्ने सीआईएनसँग बताउनुभयो । सोमबार, मंसिर १३, २०७८
स्वास्थ्य शिविर पर्खँदै काभ्रेको'घुँडा दुख्ने'गाउँ
ओलीको प्रस्तावमा एमालेले आज सर्वसम्मत नेतृत्व घोषणा गर्ने